Shina: Tolon’ireo ONG Manoloana Ny ‘Governemanta Lehibe’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2012 5:48 GMT
Tsy ela akory izay, Cui Yongyuan, mpanolotra fandaharana fanta-daza ao amin'ny China Central Television, dia namelively mafy [zh] ireo tompon'andraikitry ny fanabeazana ao amin'ny Faritanin'i Hunan, taorian'ny tsy firaikan'izy ireo hanampy tamin'ilay tetikasa fanofanana ireo mpampianatra any ambanivohitra. Tao amin'ny Sina Weibo, tranonkala Shinoa fitorahana bilaogy kiritika, nanoratra i Cui fa ny taratasy fifandraisana avy amin'ny tompon'andraikitry ny fanabeazana ao Hunan dia nilaza [zh] hoe “[izahay] tsy mandà, manohana na [mihevitra ny] handray anjara amin'ilay Tetikasa Mpampianatra Eny Ambanivohitra.”
Ilay fandaharan'asa, izay mikendry ny hifantina mpampianatra an-jatony avy any ambanivohitr'i Hunan mba hofanina, dia vatsian'ny asa fanasoavana tarihan'i Cui. Ho setrin'ireny ‘tsia telo’ ireny, namaly an-katezerana i Cui , “Tsy misy ezaka, Tsy misy foto-kevitra, Tsy misy henatra!” Navoaka manontolo tao amin'ny NDdaily [zh] ilay valinteny.
Sarin'ilay hafatr'i Cui tao amin'ny Weibo izay niteraka adihevitra.
Manana ‘governemanta lehibe’ sy ‘fiarahamonina bitika’ foana no fahitàna an'i Shina hatrizay , saingy betsaka ireo olom-pirenena no mangetaheta fiovàna. Ny ankamaroan'ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana (ONG) sy mpanao asa soa ao Shina no mbola miana-mandeha sy mazàna mitady ny fanohanan'ny governemanta mba hamitàna ny asa.
Nefa araka ny tatitry ny China Charity Donation Report nivoaka tamin'ny 2011 tao amin'ny people.com.cn [zh], maherin'ny 58.3% tamin'ireo fanampian'ny tsy miankina tamin'ny 2010 no nahodina ho any amin'ny asa fanampian'ny governemanta na ireo fikambanana eo ambany fanaraha-mason'ny governemanta, ary 1.3% monja sisa no tonga tany amin'ireo ONG miahy ny sosialy eny ifotony.
58.3 isan-jato tamin'ny fanampian'ny tsy miankina no nahodina mivantana na an-kolaka ho any amin'ny governemanta Shinoa tamin'ny 2010. Loharanon-tsary: Digital Zhongguancun
Haingana be dia nivadika ho adihevitra nasionaly momba ny fifandraisan'ny governemanta sy ny ONG any Shina ilay valintenin'i Cui. Ny sasany nanakiana ny manampahefana ao Hunan tamin'ny tsy fanohanana ny ezaky ny tsy miankina raha ny hafa indray tsy miombon-kevitra amin'ny fomba fijerin'i Cui Yongyuan.
Ny China Media Project an'ny Anjerimanontolon'i Hong Kong dia nandika ny fomba fijerin'i Yan Lieshan, Shinoa mpanao fikarohana momba ny media momba ity olana ity. Yan, izay manana traikefa ihany koa amin'ny fikarakarana fandaharan'asam-panabeazana eny ambanivohitra any Shina, dia mino fa satria eo ambany vahohon'ny fanjakana ny fanabeazana, dia sarotra ny hametraka tetikasa mifandraika amin'ny resa-panabeazana tsy misy fanohanan'ny governemanta [zh]:
Tsy afaka ny hisy mihitsy io rehefa tsy mahazo ny faneken'ny manampahefana misahana ny fanabeazana ao amin'ny faritanin'i Hunan. Raha mandingana ny manampahefam-paritra ny fandaharan'asan'i Cui ka mandeha avy hatrany any amin'ny faritra, dia ho ratsy toerana tokoa ireo manampahefana eny ifotony (ambany). Ary raha tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny manampahefam-paritra, vitsy ny tompon'andraikitry ny sekoly ho sahy hamela ny mpampianatra ao aminy hanatrika any. “Fa inona no tian-dry zareo [tompon'andraikitry ny fanabeazana ao amin'ny faritanin'i Hunan] ho lazaina rehefa niteny ry zareo fa “tsy mandà” ilay fandaharan'asa fanofanana e ? Inona no antony manisika an-dry zareo hibahana tetikasa iray izay androtsahan'ny olona vola hanampiana ny fanofanana ny mpampianatra any amin'ny faritra misy azy ireo? Tahaka ny te-hametraka ry zareo hoe izy no voalohany tsara toerana manan-jo handà azy io, toy ny hoe tokony hisaotra azy ireo aza i Cui amin'ny fitonian-dry zareo. Rehefa te-hanao zavatra iray tsara ny olona, fototra manao ahoana no mety tsy “hanakananao” azy?
Resaka fahaleovantena ve?
Ao anatin'ilay gazety Shino mpiseho isanandro Southern metropolis [zh], naneho fomba fijery iray hafa i Guo Yukuan (郭宇宽), mpanao gazety mpanadihady manana ny toerany:
Tokony hihataka tanteraka amin'ny governemanta ny ONG. Manana ny fombany manokana fitondrany raharaha ny governemanta, izay mahatonga ny fahaleovantenan'ny ONG hisy lanjany kokoa. Ireo fandaharanasa toy ny fanofanana mpampianatra any ambanivohitra, raha ny governemanta no mitantana azy, dia ho lasa resaka ambony latabatra sy ankosotra fotsiny ihany. Ny fitadiavana mpiara-miombona antoka eny ifotony no mety hanampy betsaka.
Ilay mpilaza vaovao amin'izao fotoana Wei Yingjie (魏英杰), dia nanamafy ny fomba fijerin'i Guo [zh], tamin'ny fanindriana fa ny ONG dia tokony ho sehatra mahaleo tena:
Ny fanontaniana dia hoe fomba ahoana no tokony hanampian'ny governemanta ny ONG? Mazava loatra, ny governemanta dia tokony hanampy azy ireny sy hanome azy ireny ny tohana mifandraika amin'izany. Amin'ny vanim-potoana sasany, azon'ny governemanta atao aza ny mitondra ny anjara birikiny ho an'ny ONG ho toy ny famenon'ny asa tokony hataon-dry zareo ihany. Na izany aza, tsy mifanaraka amin'ny foto-.pisainana ny hoe tonga dia hitsabahan'ny governemanta amin'ny asan'ireo ONG na hangataka ny hampiarahana ny sampan-draharaham-panjakana hiara-mitantana amin'ny ONG, izay mety hampanjavozavo ny tsipika manasaraka ny governemanta sy ny ONG na hahatonga ny ONG hiankin-doha tanteraka amin'ny governemanta.